Dhulku waa shay dabaq ah oo aan fududayn in khaladaad laga sameeyo naqshadeynta iyo isbarbar dhigga, waxaana jira xulashooyin badan oo ah alaabta sagxadda, markaa maanta waxaan ku qaadan doonaa inaad fahanto noocyada dabaqyada la heli karo. Maqaalkani wuxuu inta badan falanqeeyaa afarta dabaq ee ugu waaweyn: Dhulka Dhulka ee Injineerka ...
Had iyo jeer waxaa jiray weedh ka timaadda warshadaha sagxadda in sagxadda alwaaxdu ay tahay “dabaq saddex-dhibic ah iyo rakibidda toddoba-dhibic”, taas oo ah, haddii rakibidda ay wanaagsan tahay iyo in kale ayaa go’aamisa 70% tayada sagxadda. Adeegsiga aan ku qanacsanayn ee dabaqa waxaa inta badan sababa wax -soo -saarka ...
U ducee dalka hooyo barwaaqo iyo barwaaqo! 2021 waa sannad -guuradii 100 -aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha. ...
Unilin waxay biloowday dahaar aan biyuhu lahayn Unicoat – News Floor
Juun 9, 2021 [Belgium] Unilin Teknolojiyada ayaa ku dhawaaqday in dahaarka aan biyuhu lahayn ee “Unicoat” ay tahay hal -abuurnimadii ugu dambaysay ee patent -ka. Shirkadda ayaa sheegtay in dahaarka aan biyaha lahayn ee Unicoat uu yahay ka -hortagga ugu dambeeya ee ka -daata biyaha…